Habenkii Ma Ka Seexan Weysay Codka drones-ka “Hummmmm” ? Waa Kan Xalka.. | Xaqiiqonews
Habenkii Ma Ka Seexan Weysay Codka drones-ka “Hummmmm” ? Waa Kan Xalka..
Tusaalaha ugu fiican, hadii aad joogto muqdisho Wey adagtahay in aad kala saarto codadka diyaaradaha shacabka, iyo kuwa millatariga, diyaaradaha ku soo degaya garoonka Aadan Cade iyo drones-ka Ka kacaya Xerada Xalane ayaa Sameynaya jawi qasan oo u dhawaaqaya sida “Sawaxan Istubid ah(Hummmmmm)., waxaana intaa dheer kaalinta Badda ay ku leedahay arinkan, oo ah mid dad badan aysan la socon.
Codkan ma ahan mid innaga noo gaar ah, waana mid ay nala wadaagto dunida oo dhan, waligaa ma maqashay erayadan “Bristol Hum”, Bristol waa magaalo ingiriiska ka mid ah, ka dib marar badan oo laga maqlay shanqar u dhawaaqeysa “hummm” ayaa waxa ay dhacdadii qaatay magaca ah “Bristol Hum”.
Wargeys ka soo baxa Ingiriiska ayaa sanadkii 1970-kii waxa uu weydiyey dadka rer Bristol su,aashan ” waligaa ma maqashay shanqartan Hummm? 800 oo qof ayaa ku jawaabay haa, qaarkoodna waxa ay ka cawodeen madax xanuun iyo san dhiig ay arinkaasi ka qaadeen.
Waa tan Muqdisho oo sanadahan dambe isku badashay “Muqdisho Hum”, waxaana dad badan ay ka cabanayaan shanqarta “hummmm”,.
“Waxaan awoodi kari waayey in aan hurdo, madax ayey iga dhax galeen” ayey tiri Safiyo Aadan oo la hadashay Xaqiiqonews,.
Ma jirto sabab gooni ah oo aan ku micneen karno waxaa sababay codka aad maqashay ee “Humm” balse waxaa suurtgal in sababtu ay aheyd.
Diyaardaha Drones-ka waa ay kala duwan yihiin baaxad ahaan, waxaa jiro qaar yar oo xitaa lagu qaato “Boorsooyinka dhabarka” waxaana diyaaradahan noocan ah ay askarta u isticmaalaan howlgalada dhaw dhaw sida in ay ku kormeeraan xaafadaha u dhaw dhaw, codkoodana waa mid la maqli karo, waana cod aad u dagan oo meel dheer ah.
Nooca kale ee drones-ka waa kuwo waaweyn oo fuliya howlgalada fog fog, waxaana noocyadaasi gumeystaha Mareykanka ku isticmaalo dalkeena ugu caansan Predators, Reapers, Global hawk, ogow kuwani codkooda marnaba lama maqlo lamana arko, sababtuna waa jawiga sare ee ay ku duulayaan.
haa waa mcaquul kal in codka uu yahay dhawaaqa nooca diyaaradaha yar yar ee kor aan ku soo xusnay, laakin waxaa jiro kara waxyaabo kale oo laga yaabo in uu sababo codka aad maqashay, sii aqri qodobada xigga.
Cod Dhagahaada ah (Anxiety symptoms)
hadii codka aad maqleyso uu yahay mid ka imaanaayo madaxa, ee uusan aheyn mid ka imaaanaayo dhagaha, u gaadi , arintu wa ay ku duwan tahay drones-ka, waxaana arinkani uu xiriir la yeelanayaa xaaladda caafimaad ee loo yaqaan Anxiety symptoms.
Codka Mowjadaha Badda
Codkii ay maqleen dad badan oo dunida ah, oo ay ka mid ahaayeen dadka rer “Bristol” waxa ay baarayaasha baaritaan ku sameeyeen waxa sababa dhawaaqa drones-ka u eg ee “Hummmm”.
mid ka mid baaritaanada runta ugu dhawaa ayaa sheegay, in giriirka ay sameynayaan mowjadaha bad weynta ay saameyn ku reebayaan gunta badaha, arinkaasi oo gariir ku abuuraya meeraheena “Dhullka”, giriirkaasi oo sameynaya codka u eg kan drones-ka.
“waxaan sameynay tilaabo weyn oo aan ku sharxeyno “Signaalkan Qarsoon” ayaa lagu yiri qoraal baaritaan oo lagu daabacay (Geophysical Research Letters).
Waxaan rajeyneyna in warbxintan ay tahay mid Caawin buuxd ku siineysa, hadii aad jeclaatay la wadaag asxaabtaada, si macluumaadkan u gaaro dad badan,.